Nomery 33 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865]
&nbspDia nosoratan'i Mosesy ny nialany araka ny nandehanany, araka ny didin'i Jehovah; ary izao no nandehanany araka ny nialany:
&nbspNiala tao Ramesesa Izy tamin'ny volana voalohany, dia tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany; nony ampitson'ny Paska no nivoahan'ny Zanak'Isiraely tamin'ny tanana avo teo imason'ny Egyptiana rehetra.
&nbspFa ny Egyptiana mbola nandevina izay efa novonoin'i Jehovah teo aminy, dia ny lahimatoa rehetra; ary ny andriamaniny dia notsarain'i Jehovah.
&nbspAry nony niala tao Ramesesa ny Zanak'Isiraely, dia nitoby tao Sokota.
&nbspAry nony niala tao Sokota izy, dia nitoby ao Etama, izay teo an-tsisin'ny efitra.
&nbspAry nony niala tao Etama izy, dia nivily nankao Pi-hahirota, izay tandrifin'i Balazefona, ka nitoby tandrifin'i Migdola.
&nbspAry nony niala tandrifin'i Hahirota izy, dia nandeha nita teo afovoan'ny ranomasina ho any an-efitra, dia nandeha lalan-kateloana tany an-efitra Etama izy ka nitoby tao Mara.
&nbspAry nony niala tao Mara izy, dia nankany Elima; ary tao Elima dia nisy loharano roa ambin'ny folo sy hazo rofia fito-polo, dia nitoby teo izy.
&nbspAry nony niala tao Elima izy, dia nitoby tao amoron'ny Ranomasina Mena.
&nbspAry nony niala tao amoron'ny Ranomasina Mena izy, dia nitoby tany an-efitra Sina.
&nbspAry nony niala tany an-efitra Sina izy, dia nitoby tao Dopka.
&nbspAry nony niala tao Dopka izy, dia nitoby tao Alosy.
&nbspAry nony niala tao Alosy izy, dia nitoby tao Refidima; ary tsy nisy rano tao hosotroin'ny olona.
&nbspAry nony niala tao Refidima izy, dia nitoby tany an-efitr'i Sinay.
&nbspAry nony niala tany an-efitr'i Sinay izy, dia nitoby tao Kibrota-hatava.
&nbspAry nony niala tao Kibrota-hatava izy, dia nitoby tao Hazerota.
&nbspAry nony niala tao Hazerota izy, dia nitoby tao Ritma.
&nbspAry nony niala tao Ritma izy, dia nitoby tao Rimona-pareza.
&nbspAry nony niala tao Rimona-pareza izy, dia nitoby tao Libna.
&nbspAry nony niala tao Libna izy, dia nitoby tao Risa.
&nbspAry nony niala tao Risa izy, dia nitoby tao Kehelata.
&nbspAry nony niala tao Kehelata izy, dia nitoby tao an-tendrombohitra Sapera.
&nbspAry. nony niala tao an-tendrombohitra Sapera izy, dia nitoby tao Harada.
&nbspAry nony niala tao Harada izy, dia nitoby tao Makelota.
&nbspAry nony niala tao Makelota izy, dia nitoby tao Tahata.
&nbspAry nony niala tao Tahata izy, dia nitoby tao Tera.
&nbspAry nony niala tao Tera izy, dia nitoby tao Mitka.
&nbspAry nony niala tao Mitka izy, dia nitoby tao Hasmona.
&nbspAry nony niala tao Hasmona izy, dia nitoby tao Moserota.
&nbspAry nony niala tao Moserota izy, dia nitoby tao Bene-jakana.
&nbspAry nony niala tao Bene-jakana izy, dia nitoby tao Hora-hagidgada.
&nbspAry nony niala tao Hora-hagidgada izy, dia nitoby tao Jotbata.
&nbspAry nony niala tao Jotbata izy, dia nitoby tao Abrona.
&nbspAry nony niala tao Abrona izy, dia nitoby tao Ezion-gebera.
&nbspAry nony niala tao Ezion-gebera izy, dia nitoby tany an-efitra Zina (Kadesy izany).
&nbspAry nony niala tao Kadesy izy, dia nitoby tao an-tendrombohitra Hora, tao an-tsisin'ny tany Edoma.
&nbspAry Arona mpisorona niakatra tao an-tendrombohitra Hora, araka ny didin'i Jehovah, dia maty tao izy tamin'ny fahefa-polo taona taorian'ny nivoahan'ny Zanak'Isiraely avy tany amin'ny tany Egypta, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahadimy.
&nbspAry efa telo amby roa-polo amby zato taona Arona, raha maty tao an-tendrombohitra Hora izy.
&nbspAry ren'ilay Kananita, mpanjakan'i Arada, izay nonina teo amin'ny tany atsimo amin'ny tany Kanana, fa avy ny Zanak'Isiraely.
&nbspAry nony niala tao an-tendrombohitra Hora izy, dia nitoby tao Zalmona.
&nbspAry nony niala tao Zalmona izy, dia nitoby tao Ponona.
&nbspAry nony niala tao Ponona izy, dia nitoby tao Obota.
&nbspAry nony niala tao Obota izy, dia nitoby tao Ie-abarima tao amin'ny faritanin'i Moaba.
&nbspAry nony niala tao Ie-abarima izy, dia nitoby tao Dibon-gada.
&nbspAry nony niala tao Dibon-gada izy, dia nitoby tao Almon-diblataima.
&nbspAry nony niala tao Almon-diblataima izy, dia nitoby tao amin'ny tendrombohitra Abarima, tandrifin'i Nebo.
&nbspAry nony niala tamin'ny tendrombohitra Abarima izy, dia nitoby tao Arbota-moaba, teo amoron'i Jordana tandrifin'i Jeriko.
&nbspAry nitoby teo amoron'i Jordana izy hatrany Betijesimota ka hatrany Abela-sitima, tao Arbota-moaba.
&nbspAry Jehovah niteny tamin'i Mosesy teo Arbota-moaba, teo amoron'i Jordana tandrifin'i Jeriko, ka nanao hoe:
&nbspMitenena amin'ny Zanak'Isiraely hoe: Rehefa tafita an'i Jordana ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo,
&nbspdia horoahinareo eo alohanareo ny mponina rehetra amin'ny tany, ary horavanareo ny vato soratany rehetra, ary hosimbanareo ny sarin-javany an-idina rehetra, ary horavanareo ny fitoerana avony rehetra;
&nbspdia halainareo ny tany, ka hitoetra eo ianareo; fa ianareo no nomeko ny tany ho zara-taninareo.
&nbspAry filokana no hizaranareo ny tany araka ny fokonareo avy: ny maro isa homenareo zara-tany bebe kokoa, ary ny vitsy isa homenareo kelikely kokoa; samy ao amin'izay ivoahan'ny filokana ho azy no ho anjarany; araka ny firenen'ny razanareo no hahazoanareo zara-tany.
&nbspFa raha tsy roahinareo eo alohanareo ny mponina amin'ny tany, dia ho lay amin'ny masonareo sy ho tsilo amin'ny tehezanareo izay avelanareo hitoetra eo, ka handrafy anareo eo amin'ny tany izay onenanareo izy;ary hataoko aminareo izay nokasaiko hatao aminy.
&nbspary hataoko aminareo izay nokasaiko hatao aminy.